Internet Fraud sy Online Safety - Torohevitra an-tariby avy amin'ny Semalt ho an'ny mpampiasa Internet rehetra
Raha mampiasa Internet ianao ary manokana mailaka, dia tokony ho fantatraony fanitsakitsahana ny mailaka sy ny hosoka amin'ny aterineto.
Ny hosoka amin'ny aterineto dia karazana hosoka izay miseho amin'ny endrika isan-karazany. Miankina amin'nypejin-tserasera an-tserasera hanemorana mailaka; Indrisy anefa, tsy misy fitsipika sy fitsipika napetrak'izy ireo mba hisorohana ny hosoka sy ny Internet. FraudstersMijanòna tsy misy na inona na inona mba hahazoana fampahalalana mafonja sy tsipiriany momba ny karatra. Mendri-piderana izy ireo, saingy tsy midika izany fa tsy afaka mamantatra ireo mpangalatra ianao - labirinti giochi divertenti.Azo atao foana ny manafoana azy ireny sy mitazona ny mombamomba anao, indrindra raha tadidinao ny torohevitra manaraka omena anaoAlexander Peresunko, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital services.
Mitadiava orinasa na mpivarotra orinasa
Raha mifampiraharaha amin'ny orinasa an-tserasera dia zava-dehibe ny mikaroka mpivarotra efa voapetrakana orinasa. Noho izany, afaka manakarama mpisolovava mahay ianao na mpanao kaonty iray hanampy anao amin'ny taratasy. Ataovy azo antoka fa mahalala ny zava-drehetra ianaomomba ny toerana, ny nomeraon-telefaona, ary ny ID ny mpivarotra. Noho izany dia mety hanontany fanontaniana roa ianao alohan'ny hahatanterahana ny fifanarahana iray. Mety hitranga izanytahaka ny nangatahinao ela alohan'ny nanaovanao ny tolotra, fa tsy tara loatra satria te hijanona amin'ny aterineto ianao..Tokony hanao izany koa ianaoAtaovy azo antoka fa mividy ireo entana voatokana, fa tsy ny vokatra ao an-toerana. Raha manolotra anao ny vokatra avy any an-toerana tsy azo antoka ny mpivarotra,Mety ho famantarana mahagaga izany.
Na dia eo aza ny sombin-tsoratra voasoratra momba ny hosoka an-tserasera, dia matetika ireo mpandraharahatsy mamaritra ny mpivarotra marina. Izany no antony tokony hikaroka ny mpivarotra alohan'ny hahatanterahana ny fifanarahana iray. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manelingelinaMitarika fikarohana be loatra rehefa mahatsapa fa fandaniam-potoana izao. Avelao aho hilaza aminao fa ilaina ny mijanona tsy misy fiarovana amin'ny aterineto. Raha toa ianaoMiaraka amin'ny mpivarotra vaovao, tsy maintsy manontany ny mombamomba azy manokana, ny karatra ID, ary ny adiresy feno alohan'ny hanitsiana ny sanda. Raha ianaodia nanapa-kevitra ny hividy zavatra avy amin'ny mpivarotra iray manokana, zava-dehibe ny mahafantatra ilay singa, ny vidiny, ary ny marika. Ny sasany amin'ireo mpitsikilo dia manandranamamidinao vokatra mena na vokatra efa tapitra; Ataovy azo antoka fa ny toe-javatra nividiananao dia tsara toetra, ary ny vidiny dia tsy tokony ho avo noho ny tsenatahan'ny.
Mitandrema amin'ny mailaka tsy fantatra
Nandritra ny fotoana fohy dia mitaraina ireo mailaka tsy voavonjy. Ianao dia tokonytsy ho tratran'ny mailaka satria mety hangalatra ny mombamomba anao manokana sy ny antsipiriany amin'ny karatra. Ny hackers dia manandrana mandingana ny olona amin'ny alàlan'ny mailakafanaka sy zavatra mitovy; Zava-dehibe ny tsy haka zavatra izay tonga avy amin'ny ID tsy fantatra. Rehefa mandidy an-tserasera,Tokony hampiasa ny nomeraon-ketra nomena anao ianao raha efa nikaroka tsara ny tranonkala iray. Zava-dehibe ny tsy mampiditra ny carte de créditdetails na PayPal ID amin'ny tranokala iray tsy matoky anao.
Aza adino mihitsy ny volanao
Eny, tokony tsy hilefitra amin'ny volanao ianao raha toa ka mampidi-doza. Ny ankamaroan'ny mpanao heloka bevavaMitadiava vola amin'ny alalan'ny banky mivantana, ary raha mahita ny iray amin'izy ireo ianao dia tsy maintsy manontany ny mpisolovava anao.